Nzira yekuwana nziyo muApple Music nenzira yemazwi avo | IPhone nhau
Maitiro ekuwana nziyo muApple Music netsiva dzadzo
Apple Music ndeye mimhanzi sevhisi mukutenderera kune simba kwazvo. Vashandisi vanonyorera kune akasiyana mapurani vanozviita zvakanyanya nekusanganisa neiyo inoshanda sisitimu yemidziyo yakasiyana. Kupfuurirazve, iyo yekubatanidza-kwakawanda-dhizaini inoitawo kuti Apple Music sarudzo yakanaka yekuteerera kumimhanzi.
IOS 12, Apple yakawedzera iyo sarudzo yekutsvaga nziyo netsiva dzadzo panzvimbo pezita rayo. Nenzira iyi, kana tiri kufunga nezve rwiyo uye zita raro risingauyi, tinogona kutsvaga mazwi aro uye mhedzisiro dzakasiyana dzinoenderana nechidimbu chemazwi atinoisa chichaonekwa.
Tsvaga nziyo namazwi avo muApple Music
Ichokwadi ndechekuti dzimwe nguva hatirangariri zita rerwiyo, asi isu tinaro rinogara richitamba mumusoro medu kune rwiyo rwemutsara unozivikanwa. Kusvika ikozvino hatina kuwana rwiyo Kunze kwekunge isu tashandisa Google uye ikatidzosera kuimba yenziyo peji, uye kubva ipapo kuti tiwane iyo track yataitsvaga.
Asi Apple Music yakaunza ruzivo mukati iOS 12 iyo iyo inotitendera nayo tsvaga nziyo nenziyo dzavo. Kuti uite izvi, ingo tevera anotevera matanho ari nyore:
Kujekeswa: Izvo zvinodikanwa kuve nekunyoresa kusevhisi kuti uite iyi yekutsvaga
Tsvaga Apple Music kubva kune chero zvigadzirwa zvako
Pazasi tinya kutsvaka
Muinjini yekutsvaga iwe unogona kunyora zita rerwiyo, dambarefu kana chirevo chemashoko erwiyo. Nenzira iyi, Apple ichatsvaga zvinyorwa zvese zveApple Music mazwi uye inodzosera mhedzisiro nenziyo yauri kutsvaga.
Uye zvakare, zvakakosha kusimbisa izvo Apple Music zvakare inoratidzira mazwi enziyo dzako muraibhurari, saka une sarudzo mbiri dzekutsvaga: muraibhurari nenziyo dzese dzauinadzo, kana mune yese Apple Music repertoire. MuSpain basa iri harisi kushanda, kana zvirinani pamidziyo yatakaedza vashandisi vakati wandei. Nekudaro, isu tine chivimbo chekuti iyo Big Apple ichaenda zvishoma zvishoma uye yozopedzisira yaishandisa pasi rose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwana nziyo muApple Music netsiva dzadzo
MiniBatt Fly uye Modular, Ultra-inokurumidza kuchaja uye modularity